Xarunta Nuclear-ka Ee Faransiiska Ugu Weyn Oo La Shaaciyey Waqtiga La Xidhaayo
Waxa markii ugu horeysay si rasmi ah loo shaaciyey goorta la xidhaayo wershadda ugu weyn dhanka Nuclear ka ee wadankaasi Faransiiska, taas oo ah wershad dhalisa tamarta laydhka, waxaana la iclaamiyey in la xidhi doono bisha April ee sannadka 2020 ka.
Wershaddan oo lagu magcaabo Feschenheim ayaa ah ta ugu weyn ee laydhka siisa magaalooyin badan oo ku yaala wadankaasi Faransiiska, iyada oo la qorshaynaayo wixii lagu bedeli lahaa wershaddaasi , iyada oo ay dawlada Faransiisku ku dhawaaqday xidhitaanka wershaddaasi oo da’ahaan jirtay 40 sanno .
Wargeyska Le Monde oo uu warbixintan kazoo xigtay wargeyska Dawan ayaa sheegay in wasiirka degaanka ee dawlada Faransiiska in si rasmi ah loo xidhi doono wershadasai, iyada oo la saxeexay warqadii lagu xidhi lahaa.
Wershada ayaa sii shaqayn doonta inta la furaayo wershadda bedelaysa oo lagu magcaabo Flamenville Station , taas oo laga dhisaayo Waqooyi Galbeed wadanka Faransiiska .
Wershadan cusub ayaa dib u dhac ku yimid dhismeheeda, iyada oo la rajaynaayo inuu bilaabmo dhamaadka sannadka 2018-ka , halka uu si toosana u shaqo bilaabi doono sannadka 2020-ka isaga oo noqon doona mid ka amaan badan ta hadda shaqaysa.
Wershaddan ayaa sababta ugu weyn ee loo xidhaayo lagu sheegay iyada oo gabowday , madaama oo la furay sannadkii 1978 kii, sidoo kalena ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo soo gaadhey .
Biyo soo galay sannadkii 2014 kii bishii April ayaa ugu badnaa dhibaatada soo gaadhey, taas oo dhintay shaqadii ay dalkaasi u haysay , waxaana jiray dawlado badan oo ay ka mid tahay dawlada Jarmalka oo usoo jeedisay Faransiiska inay joojiyaan shaqada wershadaasi ,iyaga oo ka baqay in dadka iyo dhul gariir dhacaa waxyeelo u geysto.
Dalkaasi Faransiiska waxa ka shaqeeya ilaa 58 xarumood oo kuwoa Nuclearka ah, kuwaas oo dab dhan 63.2 GW siiya dalkaasi .